Disroot: Ihe eji arụ ọrụ ntanetị n'ịntanetị, n'efu na nke echekwara | Site na Linux
Disroot: Nzuzo efu, nkeonwe ma nwekwaa nchebe nke ọrụ ịntanetị
N'oge na-adịbeghị anya n'isiokwu gara aga anyị kpọrọ GAFAM versus Comunidad del Software Libre: Control o Soberanía anyị kwuru ụfọdụ bara uru ngwa nke «Comunidad de Software Libre», nke gbakwunyere ịbụ onye nweere onwe ya na imeghe, nyere ọkwa nke nchekwa na nzuzo. Na n'etiti ha bụ «Disroot».
«Disroot» bụ, na-ezo aka na saịtị gọọmentị na Spanish: "una ikpo okwu na-enye ọrụ ntanetị, dabere na ụkpụrụ nke nnwere onwe, nzuzo, gọọmentị na ịchịisi". Ya mere, ọ na-ekwukwa na ọ na-abịa: Enweghị ndị na-eme trackers, enweghị mgbasa ozi, enweghị profaịlụ, enweghị nchịkọta data!
"Disroot bụ ọrụ dị na Amsterdam, nke ndị ọrụ afọ ofufo na-elekọta ma dabere na nkwado nke obodo ya".
«Disroot» bụ usoro ntanetị nke e mepụtara site na ncha site n'aka ndị mmepe mbụ ya, na-eche echiche ịnweta saịtị nke nwere ike ịnye ha na ndị ọzọ, ngwa ndị dị mkpa iji nweta ekwurịta okwu, kekọrịta ma hazie. N'ụzọ dị otú a, na ngwa ndị a na-agbaso ụkpụrụ nke ịbụ: Mepee, agbasaghị, gbanwere na nsọpụrụ nke Nnwere Onwe na Nzuzo.
Ha wee bido «Disroot». Karịsịa site na ijikọ ngwaọrụ yana rụọ ọrụ ndị dị na otu ebe, wee tinye ọrụ ndị ọzọ nke gị uru nke «Comunidad del Software Libre» na ndị ọzọ nwere mmasị, n'ozuzu ha.
«Disroot» bu ikpo okwu nke choro igbanwe uzo ndi mmadu si emekorita na web, ya bu, o choro ibu ma nye ndi mmadu uzo ozo di nma ma di nma, banyere oru ntaneti, karia nkwurita okwu, ka ha wee nweta zere iji omenala nke ikike na ngwanrọ emechiri emechi na thentanetị. Dị ka, «Disroot» ọ bụ otu n'ime ihe ndị ọzọ na-emeghe ma na-agbaso ụkpụrụ dịnụ, nwere onwe ha n'ezie, lekwasịrị anya na uru ndị mmadụ na-abụghị na nrigbu ha.
1.1 Mmepe Akaụntụ
1.1.1 Nzọụkwụ 1
1.1.2 Nzọụkwụ 2
1.1.3 Nzọụkwụ 3
1.1.4 Nzọụkwụ 4
1.1.5 Nzọụkwụ 5
Imepe akaụntụ na «Disroot», Usoro dị mfe. Lee usoro ndị dị mkpa iji mee nke a:
Mepee ukara saịtị na Spanish na nke anyị «Navegador web». Gaa na ngalaba «Servicios» ma pịa nke ọ bụla n'ime ha. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga - ahọrọ nhọrọ nke akpọrọ «Correo». Ozugbo ngalaba a ma ọ bụ ihe ọzọ mepere, a na-akpọ bọtịnụ ahụ «Inscribirse a Disroot».
Mgbe ịpị bọtịnụ ahụ «Inscribirse a Disroot», anyị na-n'ihu na a«Formulario de Registro» na anyị ga-ejupụta, wee pịa na njedebe nke ya, na-akpọ bọtịnụ «Continuar». Na ụdị a mpaghara ndị a na-egosi:
Aha njirimara: Ebe enwere mkpụrụedemede pere mpe na enweghị oghere enwere ike iji, site na A ruo Z na-enweghị Ñ, nọmba na oge.
Aha ngosi: Ebee ka akwadoro ka ejiri otu aha ahu.
Ajuju nkwado: Ngalaba nkwado ebe enwere azịza ajụjụ dị n'okpuru (na mkpụrụedemede uhie), yana opekata mpe mkpụrụedemede 150 na opekata mpe mkpụrụedemede 255.
Ozi nkwenye: Ihe a ga - eji n'oge usoro nyocha na ihe a ga - ehichapụ ozugbo emepụtara akaụntụ ahụ.
Okwuntughe Ọhụrụ: Kedu nke a ga-emerịrị na-agbaso ihe ndị a chọrọ iji gosipụta na mpempe ndebanye.
Ozugbo ịpịrị bọtịnụ«Continuar», Email 2 ga-abata na adreesị ozi-e ederede. Otu nwere ozi ekele ị debanyere aha na ikpo okwu yana onye ọzọ nwere koodu nkwenye nke ga-etinyerịrị na ndebanye ndebanye na-esote iji gaa n'ihu usoro ahụ. Nzọụkwụ a na-ejedebe na ihuenyo ọzọ ebe a gwara anyị na koodu ahụ emeela nke ọma, yana nke akpọrọ bọtịnụ ahụ «Continuar».
Ozugbo ịpịrị bọtịnụ «Continuar», windo ọhụrụ na-egosi na«Términos del Servicio», nke anyi aghaghi iguta ma nakwere, site na ichoputa igbe a na-akpo m nabata, wee pịa igodo a na-akpọ «Continuar». Na njedebe windo ọhụrụ ga-emepe (https://apps.disroot.org/) n’egosiputa anyi dum ọrụ dị (ngwa) nke Platform «Disroot».
Na Okwuntughe windo ohuru nke«Inicio de Sesión», ebe anyi gha ewebata nke anyi «Usuario y Contraseña» kere iji banye n'ime Platform «Disroot». Anyị nwekwara ike ịga ọrụ ọ bụla ozugbo. Iji tinye ma jiri ọrụ ndị enyere ebe ahụ, anyị ga-echere oge kachasị nke 48 awa azụmahịa ma ọ bụ ruo mgbe ikpo okwu site na email na-agwa anyị na anyị enwegoro ike iji ọrụ ya n'ịntanetị.
Kedu ka anyị nwere ike isi hụ, ozugbo n'ime, ikpo okwu nke «Disroot» nwere ọrụ ịntanetị ndị a:
Email: Ọrụ Email
Cloudgwé ojii (ígwé ojii): Ọrụ Nchekwa igwe ojii
Ogba: Tonweta Network Community.
Nzukọ: Forumlọ Nzukọ Ezumezu.
Nkata (XMPP): Obodo Chat Room.
Etherpad (Mgbochi): Mmekọrịta akwụkwọ na-arụkọ ọrụ ọnụ n'otu oge na ihe nchọgharị weebụ.
Ethercal ( Calcs): Mmekọrịta site na iji akwụkwọ ntanetị rụọ ọrụ n'otu oge na ihe nchọgharị weebụ.
Onyinye (Bin): Minimalist na oghere mepere emepe na ntanetị na mkparịta ụka.
Bulite: Ọrụ nnabata faịlụ nwa oge ịkọrọ site na njikọ.
SearX: Ọrụ ọchụchọ site na iji enginear SearX Meta
Ntuli aka (Ntuli aka): Framadate dabere na nhazi oge atumatu yana oru ime mkpebi.
Mbadamba Projectlọ Ọrụ (Taiga): Nchịkwa oru ngo.
Okwuntughe: Ngalaba njikwa ịgbanwe ma ọ bụ tọgharịa paswọọdụ ma jikwaa ozi nkeonwe onye ọrụ.
Dị ka anyị hụworo, «Disroot» bụ nnọọ uru online ikpo okwu,, ebe ọ na-enye anyị ohere iji ọtụtụ ngwa na ọrụ dị oke ọnụ maka ndụ dijitalụ anyị dị ugbu a kwa ụbọchị, ha niile nwere onwe na nchekwa. N'ụzọ dị otú a na anyị nwere ike ịme njem bara uru ma na-aga n'ihu «espacios más libres, seguros, privados y confiables», nke aka anyi mere «Comunidad del Software Libre».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Disroot: Nzuzo efu, nkeonwe ma nwekwaa nchebe nke ọrụ ịntanetị
Linus Torvalds ga-agụnye dm-clone maka Linux Kernel alaka 5.4
Nke a bụ otu ha si gbalịa ịnabata akaụntụ WhatsApp nke Albert Rivera